तत्काल स्कुल बन्द नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड आज सार्वजनिक गरिने – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. तत्काल स्कुल बन्द नगर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड आज सार्वजनिक गरिने – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
नेपालमा कोरोना सं’क्रमणको दोस्रो लहर सुरु भए पनि शैक्षिकलगायत कुनै पनि क्षेत्र तत्काल बन्द नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अझै केही दिनको ‘ट्रेन्ड’ हेरेर मात्र यस सम्बन्धी थप रणनीति तय गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
कोभिड सं’कट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) र स्वास्थ्य मन्त्रालले भने केही दिन अघि नै कम्तिमा तीना साता विद्यालय बन्द गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले भने स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाएर पालनामा कडाइ गर्ने तर, तत्काल कुनै पनि क्षेत्र बन्द नगर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए।
मास्क अनिवार्य गर्ने, भिडभाडमा पूर्ण रोक लगाउने तथा सार्वजनिक यातायातमा नयाँ मापदण्ड बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो। स्वास्थ्यसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड आज (मंगलबार) सार्वजनिक गरिने सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।
सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले पनि विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सुझाब लिन सरोकारवाहरुसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा पनि तत्काल शिक्षण संस्था बन्द नगर्न सरोकारवालाहरूले सरकारलाई सुझाब दिएका थिए।
उनीहरुले संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विद्यालय बन्द गर्ने वा सञ्चालन गर्ने भन्ने निर्णयको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा निर्णय लिइरहनु उपयुक्त नहुने भनाइ उनीहरूको थियो ।
पछिल्लो समय कोरोना सं’क्रमणबाट बालबालिका धेरै प्रभावित बनेका छन्। सं’क्रमणकै कारण केही बालबालिकाको मृ’त्युसमेत भइसकेको खबर सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सोमबार सं’क्रमण देखिएका पाँच सय ५९ मध्ये २४ जना १८ वर्षमुनिका छन् । आइतबार यो उमेर समूहका २७ जनामा सं’क्रमण देखिएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमका अनुसार पछिल्लो १० दिनमा दुई सय ८० बालबालिकामा कोरोना सं’क्रमण देखिएको छ। सोमबार सं’क्रमण देखिएका बालबालिकामा सबैभन्दा कम उमेर पाँच वर्षका एकजना र सबैभन्दा बढी १७ वर्ष उमेरका पाँचजना छन्। त्यसैगरी, २८ चैतमा ५२ बालिबालिकामा, २७ चैतमा ३४, २६ चैतमा ५१, २५ चैतमा २५, २४ चैतमा २६, २३ चैतमा १६, २२ चैतमा १४ र २१ चैतमा ११ बालबालिकामा सं’क्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय युके भेरियन्टबाट बालबालिका धेरै प्रभावित भएका छन्।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको April 13, 2021 April 13, 2021 181 Viewed